Madaxweyne Farmaajo oo kulan deg deg ah la yeeshay hanti dhowraha guud ee qaranka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo kulan deg deg ah la yeeshay hanti dhowraha guud ee qaranka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay kulan deg-deg ah la yeeshay hanti-dhowraha guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale.
Labadaan mas’uul kulankooda ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in habeen hore la jabsaday xafiiska hanti dhowraha guud ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya islamarkaana laga qaatay dokumentiyo iyo qalab muhiim ah.
Kulankaasi ayaa looga hadlay wixii ka dhacay xafiiska hanti dhowraha guud iyo cidda arrinkaasi ka dambeysay, wuxuuna markaasi madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyay in baaritaan buuxo lagu sameeyo kiiskan islamarkaana lasoo xiro cidii ku lug-yeelata.
Dokumentiyada iyo qalabka laga xaday xafiiska hanti dhowraha qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa la sheegayaa inay ku saabsanaayeen kuwa ka hadlayay wax isdaba marin baahsan oo lagu sameeyay miisaaniyadii dowladda ee sanadihii 2015-ka iyo 2016-ka, taas oo gaareyso illaa 110 milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Illaa iyo haatan lama oga cidda falkaan ka dambeysay, balse waxaa soo baxaaya warar sheegaya inay ka dambeeyaan qaar ka mid ah shaqaalaha iyo xubno awood ku leh gudaha madaxtooyada, taasoo xaaladda kasii dhigeysa mid aad u adag.
Xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa ka taagan xaalad kacsanaan ah, iyadoona ciidanka NISA iyo AMISOM ay durbadiiba bilaabeen baaritaano ku aadan arrinkaan, waxayna su’aalo weydiinayaan shaqaalaha xafiiska hanti-dhowrka iyo kuwa dhismaha wasaaradda maaliyadda oo looga shakisan yahay inay arrintaan iyaga ka dambeeyeen.